FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Abanye abantu baye bathi bayakholwa kodwa bengalazi nokuba lithetha ukuthini igama elithi “ukholo.” Yintoni ukholo, ibe kutheni lubalulekile?
Abantu abaninzi bacinga ukuba umntu onokholo wamkela nayiphi na imfundiso, engenabungqina bokuchana kwayo. Ngokomzekelo, cinga ngomntu okholwayo othi, “Ndiyakholwa kuThixo.” Ukuba loo mntu ubuzwa oku, “Kutheni ukholwa?” usenokuphendula athi, “Ndakhuliswa ngolo hlobo” okanye, “Ndifundiswe loo nto.” Kwiimeko ezinjalo, usenokubonakala umncinane umahluko phakathi kokuba nokholo nokuqhatheka lula.
“Ukholo lululindelo oluqinisekisiweyo lwezinto ezithenjiweyo, ubungqina obucacileyo bezinto zokwenene nangona zingabonwa.” (Hebhere 11:1) Ukuze umntu aqiniseke ngento ayilindeleyo, umele abe nezizathu ezivakalayo zokuba iza kwenzeka. Eyona nto ithethwa libinzana eliguqulelwe ngokuthi ‘ulindelo oluqinisekisiweyo’ ingaphezu kwemvakalelo yangaphakathi okanye umnqweno osenokungenzeki. Ngoko ukholo lusekelwe kubungqina obuqinisekisiweyo.
“Kuba iimpawu zakhe [uThixo] ezingabonakaliyo zibonwa ngokucacileyo ukususela ekudalweni kwehlabathi kuse phambili, ngenxa yokuba ziqondeka ngezinto ezenziweyo, kwanamandla angunaphakade nobuThixo bakhe.”—Roma 1:20.
“Ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukumkholisa kakuhle, kuba lowo uzayo kuThixo umele akholwe ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfuna ngenyameko.”—Hebhere 11:6.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, abantu abaninzi bakholelwa kuThixo kuba nje befundiswe njalo. Basenokuthi, ‘Ndakhuliswa ngolo hlobo.’ Kodwa yena ke uThixo ufuna abo bamkhonzayo baqiniseke ukuba ukho yaye uyabathanda. Eso sesinye sezizathu zokuba iBhayibhile isithi masimfune ngokucokisekileyo, ukuze simazi kakuhle.
“Sondelani kuThixo, naye uya kusondela kuni.”—Yakobi 4:8.
Unokuba nalo njani ukholo?
IBhayibhile ithi, “ukholo lulandela oko kuviweyo.” (Roma 10:17) Ngoko into yokuqala efunekayo kukuba ‘sive’ oko iBhayibhile ikufundisayo ngaye. (2 Timoti 3:16) Ukufunda iBhayibhile kuza kukunceda ufumane iimpendulo ezichanileyo zemibuzo ebalulekileyo, njengale: Ngubani uThixo? Bubuphi ubungqina obukhoyo bokuba ukho? Ngaba ngokwenene uThixo undikhathalele? Yintoni injongo kaThixo ngekamva?
Ubungqina bokuba uThixo ukho bugcwele yonk’ indawo
AmaNgqina kaYehova angakuvuyela ukukunceda ufunde iBhayibhile. Njengoko kubonisiwe kwiwebhsayithi yethu u-jw.org/xh, “AmaNgqina kaYehova ayakuthanda ukufundisa abantu iBhayibhile, kodwa asinyanzeli mntu ukuba angene kunqulo lwethu. Kunoko, ngentlonelo siye sichaze oko kuthethwa yiBhayibhile, kuba siyaqonda ukuba umntu unelungelo lokuzikhethela into aza kuyikholelwa.”
Ngelipheleleyo sithi, ukholo lwakho lumele lusekelwe kubungqina wena ozifumanele bona njengoko uhlolisisa ukuchana koko ukufunda eBhayibhileni. Ngaloo ndlela, uza kuba ulandela umzekelo wabafundi benkulungwane yokuqala ‘abalamkelayo ilizwi ngeyona ntumekelelo inkulu yengqondo, bezincina ngenyameko iZibhalo mihla le mayela nokuba zinjalo kusini na ezo zinto.’—IZenzo 17:11.
“Oku kuthetha ubomi obungunaphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, wena ukuphela koThixo oyinyaniso, nangalowo umthumileyo, uYesu Kristu.”—Yohane 17:3.
Ngaba ubunokukhetha isayensi, oongqondo-ngqondo okanye iBhayibhile?
Ithini IBhayibhile Ngokholo?